Ogaden News Agency (ONA) – OT- Soyaalka Reer Ogaadeeniya iyo Sugulle”
OT- Soyaalka Reer Ogaadeeniya iyo Sugulle”
Soyaalka Reer Ogaadeeniya iyo Sugulle” wuxuu noqon doonaa buuggii ugu horreeyey ee noocisa ah oo Af-Soomaali ku qoran, ee wax ka qora guud ahaan siyaasadda Geeska Africa, gaar ahaanna halgankii hubeysnaa ee reer Ogadeniya iyo meesha uu hadda marayo.
Waxaa lagu daabacay Soyaalka Reer Ogaadeeniya iyo Sugulle marktabadda la yidhaahdoAuthourhouse Publications oo ku taalla magaaladaBloomingtonee gobokaIndiana,USA. Maktabaddaas waxaa wax ku leh jaamacaddaIndianaee BloomingtonSchool of Law. Waxaa kale oo laga diiwaangaliyey Library of Congress Catalogue, oo lagu kaydiyo buugaagta adduunka ee ay qoraan, qoraayaasha la aqoonsanyahay qoraannimadooda; islamarkaana waxaa la siiyey International Standard Book Number (ISBN), sahlaya in laga iibsan karo madbacad kasta iyo library kasta oo adduunka ku yaalla, isaga oo E-book ah iyo isaga oo hard copy ahba. Soyaalka Reer Ogaadeeniya iyo Sugulle oo e-book ah waxaa lagu iibin doonaa Amazon Book Shop iyo 28 kun oo kale oo online bookshops ah. Waxaa kale oo lagu iibin doona, suuqyadaa Soomaalida iyo dukaamada Soomaalida oo dhan meel kasta oo ay adduunka kaga yaallaan.
Aaan wax yar idinka tuso inta cutub ee uu buuggu ka kooban yahay, iyo taarikh kooban oo Dahir Nuur Sugulle iyo qoraaga buuga Maxamud Ugas Muxumed ku saabsan, ha moogaannin, hana u daymo la’aanin Soyaalka Reer Ogaadeeniya iyo Sugulle oo mar dhow soo gali doona suuqyada adduunka.